अदिति गुप्ता: महिनावारीको बिषयमा नि:संकोच छलफल - English-Video.net
आखिर के कारण ?
एउटा प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया
जसलाई हरेक युवती अथवा महिलाले
हरेक महीना यसै गरेर
आफ्नो आधाजस्तो उमेर पार गर्नुपर्छ,
एउटा सार्थक अनि शाश्वत प्रक्रिया
जसमा हामी र हाम्रा प्रजातिको
अस्तित्व निर्भर गर्दछ ।
तैपनि यसलाई लाजको रुपमा हेरिन्छ
यस विषयमा कुरा गर्न अप्ठ्यारो र
सरम महशूस हुन्छ
म पहिलोपटक रजस्वला हुँदा ,
यो कुरालाइ गोप्य राख्न लगाइयो,
आफ्नै बुबा र दाजुभाइबाट समेत
पछि स्कूलमा यो विषय आउँदा
जीवविज्ञानको शिक्षकले यो पाठ नै पढाउनुभएन|
(लामो हाँसो )
तपाईलाइ थाहा छ,
यी घटनाबाट मैलेके सिकें?
मैले सिकें -
महिनावारीको बारेमा कुरा गर्नु
लाजलाग्दो बिषय हो ।
मैले आफ्नै शरीरसँग
सरम मान्न सिकें ।
महिनावारीसँग अन्जान रहन सिकें,
ताकि म सभ्य मानिसमा गनिन सकुँ ।
भारतका विभिन्न स्थानमा
गरिएको अनुसन्धान अनुसार,
१० मा ३ जना युवतीहरु
पहिलोपटक रजश्वला हुँदासम्म पनि
यो के हो भन्ने विषयमा अन्जान छन् ।
अझ राजस्थानका केही भागहरुमा
यो संख्या अझ बिकराल छ
१० मा ९ बालिकालाइ आफूलाई
यो के भैरहेको छ भन्ने पनि थाहा छैन ।
तपाइलाई यो सुन्दा आश्चर्य लाग्ला
मैले कुरा गरेका अधिकांश युवतीहरु,
पहिलो पटक रजस्वला हुँदासम्म पनि
यती अन्जान थिए, महिनावारीको रगत देखेर
"मलाई ब्लड क्यान्सर भएछ,
अब मर्छु कि क्या हो"
भनेर आत्तिएका थिए ।
प्रजन प्रणालीमा हुनसक्ने
संक्रमणको प्रमुख कारण
महिनावारी हुँदा गरिने सरसफाइ हो ।
केवल १२% बालिका तथा महिलाहरुसँग मात्रै
महिनावारी हुँदा आवश्यक पर्ने
स्वच्छ तरिकाको पहुँच छ ।
यदि हिसाब गरि हेर्ने हो भने,
८८% बालिका तथा महिलाहरु
अस्वस्थ तरिका अपनाउन बाध्य छन् ।
त्यस्तैहरुमध्ये म पनि एक हुँ ।
म झारखण्डको एउटा सानो सहर
गडवाहामा हुर्किएकी हुँ,
जहाँ स्यानीटरी न्याप्किन किन्नु
लाजमर्दो मानिन्छ ।
तेसैले, महिनावारी हुन थालेदेखि म -
कपडा (टालो) प्रयोग गर्न थालें ।
हरेक महिनावारी पछि त्यो टालो
सफा गरेर राख्थें र
अर्को पटक फेरी प्रयोग गर्थें ।
महिनावारी भएको कसैले थाहा नपाउन्
भनेर त्यो टालो अँध्यारो कुनामा
कसैले नदेख्ने गरी लुकाउथें ।
बारम्बारको प्रयोगले त्यो कपडा
खस्रो हुँदै गयो अनि पाछेर फोका उठ्ने
र संक्रमण हुन थाल्यो ।
झन्डै ५ बर्ष, अर्को शहर नगएसम्म
तेस्तै टालो प्रयोग गरिरहें ।
महिनावारीले मेरो जीवनमा
अर्को एउटा विषय उठायो -
बालिका तथा महिलाहरुमाथि गरिने
सामाजिक दुर्व्यवहार ।
तपाईहरुलाई यो कुरा थाहा छ
तैपनि, थाहा नहुनेहरूको लागि
केहि बुँदाहरु भन्न गइरहेको छु -
रजस्वला भएको बेलामा मलाई
अचार छुन वा खान अनुमति थिएन
सोफामा बस्न दिइन्न थियो
न त परिवारका सदस्यहरुको खाटमा बस्न नै ।
ओछ्यानको खोल, तन्ना धुनै पर्दथ्यो,
चाहे कुनै दाग होस् वा नहोस्।
मलाई अपवित्र मानिन्थ्यो,
मलाई कुनै पनि पूजा-आजामा भाग लिन
वा पूजा सामाग्री छुन बन्देज थियो ।
मंदिर बाहिर साइनबोर्ड नै देख्नसक्नुहुन्छ
महिनावारी भएकाहरु प्रवेश निषेध
दुखको कुरा, धेरै जस्तो
घरका बुढापाका महिलाहरु नै
यस्ता नियम पालना गर्न लगाऊछन् ।
आफूले जस्तो भोगे, अरुलाई तेस्तै गराए ।
नयाँ विचारको अभावमा
पुराना कुसंस्कार नै संस्कार बनेर
एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्दैछ ।
यस क्षेत्रमा कामको अवधिमा मैले
यस्ता घटनाहरु धेरै भेटेकी छु
जहाँ, महिलाहरुलाई खाने देखि
भाँडा सफासमेत छुट्टै बसेर गर्नुपर्छ
कतिपय घरमा महिनावारी भएकाहरुले
नुहाउन नपाउने, परिवारदेखि
भिन्नै राखिने समेत चलन छ ।
भारतका ८५% बालिका तथा महिलाहरु
महिनावारी हुँदा कुनै न कुनै चलनले
पीड़ित भएकै हुन्छन्
बिचार गर्नुहोस् त, यस्तो चलनले
एउटा युवतीको आत्म-सम्मान र आत्म-विश्वासमा
कस्तो असर पार्छ होला ?
बढ्दो उमेरमा यसले पार्नसक्ने
मनोबैज्ञानिक असरले उनको व्यक्तित्व,
कति नकारात्मक असर पार्ला ?
यी अन्धविश्वासी चलनहरु मैले पनि
१३ वर्ष पालना गरें ।
र मैले साथी "तुहिन"
लाई भेटे पछि,
उसँगको छलफल पछि,
महिनावारी प्रतिको मेरो धारणा बदलियो ।
सन् २००९ को कुरा हो, तुहिन र म -
डिजाइन विषयमा स्नातक गर्दै थियौं ।
हामी एक अर्कालाई मनपराउन थाल्यौं।
उ सँगको सामिप्यले मलाई उ सँग खुलेर
कुरा गर्न सजिलो भयो ।
तुहिनलाई महिनावारीको विषयमा
अलिअलि मात्रै थाहा रहेछ ।
हरेक महीना रजस्वला हुँदा
महिलाहरुको तल्लोपेट बेस्सरी दुख्छ र
रगत पनि बग्छ भन्ने सुनेर
उसलाई अचम्म लाग्यो ।
रजस्वला हुँदा महिलाहरुमाथि परिवार
र समाजबाटै हुने दुर्व्यहारको
बारेमा सुनेर उ स्तब्ध भयो !!
उ, रजस्वला हुँदाको
मेरो दुखाइलाई कम गर्ने उपाय
इन्टरनेटमा खोज्न थाल्यो ।
उसले थाहा पाएको कुरा मलाई सुनाउँदा
थाहा भयो, मलाई नै रजस्वलाको बारेमा
कति कम थाहा रहेछ ।
कतिपय मेरा विश्वासहरु
अन्धविश्वास मात्र रहेछन्।
मेरो मनमा यस्तो विचार उठ्यो,
यति पढ़े लेखेको हुँदा
त महिनावारीको बारेमा
गलत जानकारी रहेछ भने,
संसारमा यस्ता लाखौ युवतीहरु होलान्
जसलाई महिनावारीको बारेमा
अति कम जानकारी होला ।
समाजमा महिनावारीको बारेमा किन चर्चा
गरिँदैन र किन यसलाई लाजको रुपमा हेरिन्छ,
यो पत्ता लगाउन मैले १ बर्षे रिसर्च थालेँ
साधारणतया, महिनावारीको विषयमा
अज्ञान तथा गलत धारणा
ग्रामीण परिवेशमा मात्रै छ भन्ने लाग्छ ।
तर मैलेअध्ययनको क्रममा के थाहा पाएँ भने,
यो समस्या शहरी क्षेत्रमा पनि उस्तै छ ।
पढेलेखेका शहरी क्षेत्रका
मान्छेको धारणा पनि उस्तै छ ।
धेरै अभिभावक तथा शिक्षकहरुसँग
छलफल गर्दा के थाहा भयो भने,
उनीहरु पनि उमेर पुगेका युवतीहरुलाई बेलैमा
रजस्वलाको बारेमा जानकारी दिन त चाहन्छन,
तर समाजले लाजको रुपमा हेरेको यो विषयमा
उपाय नपाएर विवश रहेछन् ।
अचेलका युवतीहरुको कक्षा ६ वा ७ मा
पढ्दादेखि नै महिनावारी हुन थाल्छ ।
तर हाम्रो पाठ्यक्रममा रजस्वलाको बारेमा
कक्षा ८/९ मा मात्रै पढ़ाइन्छ ।
अप्ठ्यारो मानेर शिक्षकहरुले
यो पाठ नै पढ़ाउदैनन् ।
विद्यालयमा महिनावारीको विषयमा पढाइ नै हुदैन ,
अविभावकहरु यस विषयमा कुरै गर्दैनन,
अनि युवतीहरुले थाहा पाउने कहाँबाट ?
२ दशक अघिको र अहिलेको अवस्थामा
केही परिवर्तन छैन ।
यही कुरा मैले तुहिनलाई सुनाएँ र
हामीले सोच्यौं केही यस्तो काम
जसको मद्धतले केटीहरु आफैले
महिनावारीको विषयमा बुझ्न सकून्,
कुनै यस्तो तरीका, जसले
अभिभावक एवं शिक्षकहरुलाई
युवतीहरुसँग महिनावारीको विषयमा
छलफल गर्न सहज बनावोस् ।
मेरो रिसर्चको क्रममा मैले धेरै नै घटनाहरु
जम्मा गरेको छू । यी घटनाहरु
युवतीहरुले महिनावारी हुँदा भोगेका हुन् ।
आफैले भोगेका विषयमा आफ्नो समूहमा
कुराकानी गर्न सबैलाई उत्सुकता लाग्छ ।
हो, हामीले चाहेको यस्तै हो ।
हामी यिनै कथाहरुलाई लिएर युवतीहरुको मनमा
उत्सुकता बढाउँदै रजस्वलाको बारेमा
जानकारी दिन सक्छौं ।
हामीले यिनै कथाहरुहरुलाई जानकारीको
स्रोतको रुपमा उपयोग गर्ने विचार गर्यौं ।
हामीले एउटा 'कमिक' बनाउने निर्णय गर्यौ ।
कार्टूनका चरित्रहरुले नाटकीयरुपमा
यी कथाहरुलाई प्रस्तुत गरेर
युवतीहरुलाई महिनावारीको विषयमा
रमाइलो ढंगले जानकारी गराउन सक्छ ।
बिभिन्न चरणहरुको प्रतिनिधित्वगर्न
हामी संग ३ वटा पात्र छन् -
पिंकी - जसको अहिले सम्म
महिनावारी सुरुभएको छैन ।
जिया - कमिक पढ्दै जाने क्रममा
उसको पहिलो महिनावारी हुन्छ ।
मीरा - उसको पहिलेनै
महिनावारी सुरु भइसकेको छ ।
कथामा चौथो चरित्र पनि छ - प्रिया दिदी
उनकै माध्यमले केटीहरुले
बढ्दो उमेर तथा महिनावारीको
सरसफाई व्यवस्थापनको बारेमा
जानकारी पाउछन् ।
कमिक बनाउने क्रममा हामीले
कुनै पनि चित्रले कतैबाट प्रश्न नउठोस्
वा सांस्कृतिक भावनामा चोट नपुगोस्
भन्ने कुरामा खूब ध्यान दिएका छौं ।
किताब छापेर नमुनाको रुपमा पठाउँदा
युवतीहरुले किताब खूब मन पराएको पायौँ ।
उनीहरु त्यो किताब पढ़ेर महिनावारीको बारेमा
आफैं थाहा पाउन उत्सुक देखिन्थे ।
अविभावक तथा शिक्षकहरु सोही किताबले
महिनावारीको विषयमा छलफल गर्न
सहज महसूस गर्दै थिए ।
कहिले काही केटाहरु समेत
सो किताब पढ्न उत्सुक देखिन्थे ।
संकोच हटाउने वातावरण बनाउन मद्धत गर्यो ।
कतिपय स्वयंसेवकहरुले यही नमूना लिएर
सतर्कता जगाउने कार्यशाला संचालन गर्न
भारतका विभिन्न ५ क्षेत्रहरुमा गए ।
यही नमूना किताब लिएर एकजना स्वयंसेवकले
लद्दाखका युवा भिक्षुणीहरुलाई समेत
महिनावारीको बारेमा जानकारी गराए ।
हामीले यो कमिकको पछिल्लो संस्करण -
महिनावारीको कमिक नाममा
गत वर्षको सेप्टेम्बरमा प्रकाशित गर्यौ ।
र अहिले सम्ममा भारतका ४००० भन्दा बढ़ी
युवतीहरुले यो किताब पढिसकेका छन् ।
हामी स्थानीय संगठनहरुसंग मिलेर
यो किताबलाई विभिन्न भाषामा अनुवाद गरेर
अन्य १० देशमा उपलब्ध गराउदै छौ ।
भारतका विभिन्न क्षेत्रका १५ स्कूलहरुले
युवावर्गलाई महिनावारीबारे जानकारी दिने
आफनो पाठ्यक्रममा समावेश गरेका छन् ।
मलाई गर्वलाग्छ हाम्रो प्रयासप्रति
जब देख्छु - विभिन्न स्वयंसेवकहरु,
शिक्षक, प्रधानअध्यापकहरु सबै एकजुट भएर
आफ्नो समुदायका युवतीहरुले सही उमेरमै
महिनावारीको जानकारी प्राप्त गरुन् भन्दै
यसप्रतिको संकोच हटाउन लागिपर्नुभएको देख्दा
एउटा यस्तो भविष्यको कल्पना गरौँ ,
जहाँ महिनावारी कुनै अभिशाप, कुनै रोग नभएर
युवतीहरुको जीवनमा आउने एउटा सकारात्मक
परिवर्तनको रुपमा स्वीकार गरिन्छ
यहाँ आउनुभएका सबै अभिभावकहरुलाई
सानो अनुरोध गर्दै, बिदा माग्न चाहन्छु
प्रिय अभिभावकहरु !
रजश्वलाको बारेमा कुरा गर्न
लाज मान्नुहुन्छ भने,
तपाईका छोरीहरु पनि त्यसैको सिको गर्नेछन् ।
त्यसैले, रजस्वला सकारात्मक बनिदिनुहोस्
अदिति गुप्ता: महिनावारीको बिषयमा नि:संकोच छलफल | TED Talk | TED.com